दु:खद खबर – जम्मु कश्मिरमा गो’लि ला’गेर एक गोर्खा सैनिकको मृ’त्यु ! काठमाडौं । भारत र पाकिस्तान दुवैले दा’बी गरेको जम्मु कश्मीरको सीमा एक भारतीय सैनिक मा’रिएका… – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/दु:खद खबर – जम्मु कश्मिरमा गो’लि ला’गेर एक गोर्खा सैनिकको मृ’त्यु ! काठमाडौं । भारत र पाकिस्तान दुवैले दा’बी गरेको जम्मु कश्मीरको सीमा एक भारतीय सैनिक मा’रिएका…
दु:खद खबर – जम्मु कश्मिरमा गो’लि ला’गेर एक गोर्खा सैनिकको मृ’त्यु ! काठमाडौं । भारत र पाकिस्तान दुवैले दा’बी गरेको जम्मु कश्मीरको सीमा एक भारतीय सैनिक मा’रिएका…
काठमाडौं । भारत र पाकिस्तान दुवैले दा’बी गरेको जम्मु कश्मीरको सीमा एक भारतीय सैनिक मा’रिएका छन् । नेपाली मूलका हवल्दार दीपक कार्की पाकिस्तानी सेनाको गो ली ला’गेर मा’रिएका हुन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमले पाकिस्तानी सेनाले शीतयु द्धको उल्लंघन गर्दै भारतीय सैनिक कार्की मा’रिएको जनाएका छन् । समाचारका अनुसार दिपक कार्की गुल्मी क्षत्रकोट ५, खर्ज्याङ निवासी श्री शलिकराम कार्कीका छोरा दिपक कार्कीको नि’धन भएको हो । उनको निधन भएपछि सिङ्गो गाउँ सो’कमा डु’बेको छ ।
पत्रिकाले स्रोतलाई उद्धृत गर्दै सैनिकको शरीरमा थुप्रै फ्रे क्चर पनि भएको बताएको छ । पत्रिकाका अनुसार गलवान घाटीमा भएको घटनामा भारतीय सैनिकले चिनियाँ सैनिकलाई क;डा जवाफ फर्काएका थिए ।दुबै पक्षका सेनाबीच थुप्रै घण्टासम्म झ डप जारी रह्यो । उक्त घटनामा थुप्रै सैनिक नदीमा ख’सेको पत्रिकाले बताएको छ । स्रोतका अनुसार नदीमा ख;सेका र चिसोका कारण पनि थुप्रै सैनिकको निधन भएको थियो । इताजाखबर
फेरि लम्बिने भयो लकडाउन, कहिलेसम्म?
मेलापात गर्ने बाटो बनाइदिन मन्त्री गु’हार्दै सदरमुकाम पुगे जुम्लाका महिला